डान्स मात्र होईन स्टाईल र बोल्डनेसमा पनि उस्तै छिन् कार्टुनिज क्रुकी आश्मा, हेरौ १३ तस्बिर …. – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारडान्स मात्र होईन स्टाईल र बोल्डनेसमा पनि उस्तै छिन् कार्टुनिज क्रुकी आश्मा, हेरौ १३ तस्बिर ….
आश्मा विश्वकर्मा नेपालको एक मात्र बि-गर्लिङ गर्ने युवती हुन् । उनले छोटो समयमै दर्शकहरुको मन जितेकी छन् । कार्टुन्ज क्रु मेम्बर आश्माका हरेक भिडियोहरु दर्शकले खोजी खोजी हेर्ने गरेका छन् ।
सुन्दर डान्सर र सुन्दर मुहारका कारण निकै चर्चामा छिन् ।कहिले काँही नदेखेको सपना पनि पुरा हुन्छ भनेजस्तै धेरै मानिसहरुले पनि नसोचेको सफलताहरु प्राप्त गर्छन । आफ्नो काम प्रतिको लगनशिलता र धैर्यताले मानिसलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउँछ ।
यस्तै भएको छ, अहिलेकी हिट डान्सर आश्मा विश्वकर्मा को जीवनमा पनि । उनी शुरुमा सामान्य डान्सर थिईन् । नृत्यमा एमदमै मन जाने भएकीले उनले आफ्नो पढाईलाई भन्दा बढि नृत्यमा मन राख्थिईन् ।आस्मा शुरुमा कार्टुन्ज क्रुमा आउँदा केही असहज महशुस गर्थिन ।
किनभने कार्टुन्ज क्रुमा उनी एक्ली केटी थिईन तर, क्रमशः टिम लिडर सरोज अधिकारीको नेतृत्व क्षमताले अत्यन्तै सहज बनाउँदै लग्यो । अहिले त उनी क्रुकी खम्बा बनिसकेकी छिन् ।लामो समय देखि आफ्नो प्रस्तुति मार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन दिँदै आएकी आश्मालाई ग्रुपमा सबैले माया गर्छन् ।
उनी डान्स, टिम र परिवारसँग असाध्यै रमाउछिन ।सरोज अधिकारी लगायतका सबै साथीहरूले उनलाई कार्टुन्ज क्रुकी रानी भएको बताउँछन् । आश्माले आफ्नो डान्स मार्फत सबै नेपालीको मनमा बस्न सफल भएकी छिन्। उनको नृत्य त सुन्दर छ नै साथै उनी राम्री पनि उत्तिकै छिन्।
आश्मा नेपालकी पहिलो बी र्गल हुन्। उनी अहिले निकै लोकप्रिय भएकी छिन्। नृत्य सिक्न कलाकेन्द्रमा प्रशिक्षण लिएदेखीनै उनले नृत्यमा केही गर्ने सपना देखिसकेकी थिईन् ।नृत्य क्षेत्रमा भविष्य खोजेकी उनले नृत्यमा मात्र नभई अहिले कलाकारितामा पनि राम्रो स्थान प्राप्त गरेकी छिन् ।
शुरुमा सामान्य डान्सरबाट करिअर थालेकी उनले कार्टुन क्रुजसँग सहकार्य गरेदेखी नृत्यमा प्रगति गर्न थालेकी हुन् ।आश्मा विश्वकर्मालाई युटुबमा सर्वाधिक रुचाइएको छ । द कार्टुन क्रु कि सदस्य समेत रहेकी आश्माको डान्सको फ्यान त विश्वभर नै छन् ।
उनले अभिनय गरेका गीतको भिडियोलाई लाखौ भ्यूज मिल्ने गरेको छ । आश्मा म्यूजिक भिडियोसँगै वेव सिरिजमा पनि रमाउने गर्छिन् ।नेपालका कुनैपनि अभिनेत्रीको त्यस्तो छैन । तर युट्युबमा बेजोड डान्सकै कारण लोकप्रिय बनेका नेपाली डान्स ग्रुप ‘कार्टुन्ज क्रु’की एक मात्र महिला मेम्बर हुन् आश्मा विश्वकर्मा ।
तर, आश्माले अहिलेसम्म आफूलाई चलचित्रको दुनियाँमा प्रवेश गराउन पाएकी छैनन् । आश्मालाई चलचित्रमा काम गर्ने रुची त छ, तर भनेजस्तो कथा नआएकाले काम नगरेको तर्क उनले गरिन् ।आश्माका लागि नेपाली चलचित्रका निर्माताले अफर नगरेका होइनन् ।
तर, आश्मा चलचित्र खेल्नका लागि सबै कुरा मिल्नुपर्ने बताउँछिन् । आश्माको डान्सको फ्यानहरुले उनलाई चलचित्रमा पनि हेर्न चाहेका छन् ।आफूले सोचेको र चाहेको कुरा गर्न पाइयो भने जीवन यसै रमाइलो हुने बताउने उनी मोबाइल, लिपिस्टिक र कम्प्याक्ट पाउनि कहिल्यै छुटाउदिनन ।
नृत्यमा मात्र हैन आश्माले वेभ सिरिज २१ फर्ष्ट लभमा मूख्य भुमिका निर्वाह गरेकी छिन् । यसो त केही समय अघि उनले मूख्य अभिनय गरेको वेभ सिरिज यु एण्ड आई को ट्रेलर पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यसरी आश्मा सामान्य डान्सरदेखी कार्टुन क्रुजको स्टार सम्म बन्न सफल भएकी हुन् ।